Yifihle inkqayi-Ezona ngcebiso zilungileyo zisetyenziswayo | IBezzia
Iingcebiso ezifanelekileyo zokufihla impandla ekufuneka uyazi
USusana godoy | 10/10/2021 20:00 | Ubuhle
Ukulahleka kweenwele yenye yeengxaki abantu abaninzi abajongana nazo. Kungenxa yoko le nto kukho iindlela ezininzi nangakumbi ekufuneka sikwazi ukuzenza fihla impandla ngendlela ephathekayo kwaye ibonisa kancinci. Ukubonana ngeenwele kwakhona kuhlala kuyinto eyonyusa ukuzithemba kwaye namhlanje siza kuyiphumeza.
Nangona kunjalo I-alopecia ixhaphake kakhulu kubo kunakuzoKuyinyani ukuba kunokubakho izizathu ezahlukileyo zokuba kutheni kufuneka sijongane nayo. Ke, kuhlala kungcono ukuba ubanjwe nezisombululo esele zikhona. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba imalunga nantoni?
1 Fihla inkqayi: Inwele entsha
2 Iifayili ezincinci zeCapillary
4 Imigca emincinci
5 Ukwenza iinwele
Fihla inkqayi: Inwele entsha
Nangona kubonakala ngathi kuyaphikisana, akunjalo. Kuba ukuba sithetha ngokulahleka kweenwele, kuyinyani ukuba akusoloko kwenzeka kuzo zonke iindawo ngokulinganayo. Oku kubangela ukuba amangenelo aye nzulu kancinci okanye mhlawumbi ngaphezulu kwentloko okanye 'isithsaba'. Ke ngoko, akukho nto ifana nokuzama ukwenza iinwele ezintsha ezingaphezulu koko. Ukusikwa ngevolumu, kunye namaleya kunye nee-bangs xa kunokwenzeka, yeyona ndlela ilungileyo. Umthamo weenwele mfutshane kancinci ukwacetyiswa, kuba iyakwenza ukuba ukubonwa kweenwele ngakumbi.
Iifayili ezincinci zeCapillary
Ngokukodwa xa sithetha ngeenwele ezimfutshane, esi sesinye sezona zisombululo zilungileyo. Sesinye sezo zisombululo zikhawulezayo zisishiya sinesiphumo esibalulekileyo. Singatsho ukuba Luhlobo lomgubo owenziwe ngekeratini kwaye nayo iya kuhambelana nayo, ke kulula ukuzibeka. Kuyinyani ukuba kuya kuhlala kukho iimveliso zokulungisa, ezifana nesitshizi, esiya kuqinisekisa ukusisigxina kwabo ezinweleni, ngakumbi ukuba kuyabhudlwa ngumoya okanye ufuna ukunxiba ixesha elide. Kungcono ukubonisana nengcali kuba ukuba uyisebenzisa rhoqo, inokukunika ukugqitywa okunamafutha kwizinwele zakho. Isisombululo esigqibeleleyo sethutyana sokukubona kwakhona ngeenwele.
Xa sisenokungabikho ukubizwa kweenwele, sinokuhlala sisebenzisa izandiso. Ngokukodwa kuba zilungele ukufihla ezona zinwele zibalaseleyo kwaye zinike ukugqitywa kwendalo kunye nokukhanya okukhulu, njengoko sithanda. Njengoko usazi kakuhle, kukho iintlobo ezininzi zezandiso onokuzifumana. Ezinye zazo zinokunxitywa ixesha elide kwaye ezinye ziya kufakwa okanye zisuswe ngohlobo lwepinpin.
Ukuthetha ngokubanzi, kuyinyani ukuba oko kubizwa ngokuba yimigca emincinci kusetyenziselwa ukunika ukubamba kwevolumu kwinxalenye ephezulu yentloko. Ukuze kungabonakali ukuba kukho ukulahleka kweenwele. Kuba le ikwayinjongo yokhetho ngokwendalo njengale sithetha ngayo ngeli xesha. Ukongeza ekufihleni inkqayi, kufuneka sitsho ukuba ungayinxiba iiveki okanye iinyanga, ke sesinye sezibonelelo zayo ezilungileyo kunezinye izisombululo. Ukwenza oku, kuya kufuneka ubuze kwisalon yakho yesiqhelo kwaye uyokonwabela iziphumo kuba nkqu nomoya awuzukukwazi nayo.
Ngamaxesha athile kuphela, sinayo i- ukwenziwa kweenwele. Oku kuyenza ifaneleke ukufihla eso 'sithsaba' okanye senze iingcambu zande kancinci, esikhokelela ekubeni sizibone sineenwele ezininzi okanye sithi ndlela-ntle kwinkqayi. Namhlanje sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo, ukusuka kwezo zisetyenziswe ngesiponji esimanzi ngokungathi bubuso bokuzenzela, ukutshiza kugqitywe. Kukho zonke izithunzi, ke akukho nzima ukukhetha eyakho kwaye ziyathengiswa nakwiivenkile ezinkulu, kunye nedayi. Ungakhetha oluphi ukhetho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Iingcebiso ezifanelekileyo zokufihla impandla ekufuneka uyazi
Imanicure yesiFrentshi ekhaya ngezikhonkwane ezimfutshane